ကစားစရာများနှင့် DIY၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကစားစရာများပြုလုပ်နည်း - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> ကစားစရာအရုပ်
ကစားစရာများသည်ကလေးများအတွက်အဓိကသင်ကြားပေးသည့်အရာများဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည်အရင်းအမြစ်မရှိသောတိုင်းပြည်များ၌ပင်ကစားစရာများနှင့်ကြီးပြင်းလာကြသည်၊ အကယ်၍ ကစားစရာများမရှိပါက၎င်းတို့တွင်ရှိသည့်မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုသူတို့လုပ်သည်။
ကစားစရာ DIY ကိုကြိုးစားရန် (သို့) ကစားစရာများကိုမိမိကိုယ်တိုင်မည်သို့ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်နေ့တွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် Arvind gupta လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်က TED ဟောပြောချက်တွင် အိန္ဒိယတီထွင်သူသည်ပြန်လည်အသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများမှကစားစရာများကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူ၏အမွေသည်အထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။
Ikkaro တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဤအကြောင်းအရာကိုသာအဓိကအာရုံမစိုက်ပါ။ သို့သော်အိမ်လုပ်၊ ပြန်လည်အသုံးပြုပြီးအလွယ်တကူလက်လှမ်းမီသောပစ္စည်းများပါရှိသောရိုးရှင်းသောကစားစရာများ၏ဒီဇိုင်းသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကလေးတစ် ဦး သည်မိမိကစားစရာများနှင့်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည့်အရာမှာသူတို့ကိုချိုးဖျက်ခြင်းဖြစ်သည်
သူတို့ကိုငါချိုးဖျက်တာအပြင်ထပ်ထည့်မယ်၊ သူတို့ကိုလုပ်ပါ။ သူတို့ကိုထုတ်လုပ်ကြပါစို့။ ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်လေ့လာသင်ယူခြင်း၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါငယ်ငယ်တုန်းကစက္ကူ၊ ကတ်ထူပြား၊ တုတ်၊ ကျောက်ခဲနဲ့တခြားကစားစရာတွေအားလုံးနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်။
LEGO ပရိတ်သတ်ကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ သင်ဟာ အများကြီးလုပ်ထားတာ သေချာပါတယ်။ သင်မျှဝေလိုသော တောင်များ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်အတူ သို့မဟုတ် နောင်တွင် ထိုပုံကို သင်မည်ကဲ့သို့ ပြန်လည်စုစည်းနိုင်သည်ကို သတိရရန်။
ယင်းအတွက်၊ သင်၏ set သို့မဟုတ် assembly kit ကိုaဖြင့် ဖန်တီးခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တရားဥပဒေသ နှင့်အသုံးပြုပါ LEGO ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်လုပ်ရန် တိကျသောဆော့ဖ်ဝဲ။ ယင်းနှင့်အတူ Lego Boost ဂန္ထဝင်စက်ရုပ်များထဲက အချို့သောအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်မျှဝေလိုသည်မှာ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင် ကျွန်ုပ်၏သမီးများသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော၊ ကလေးများအတွက်သာဖြစ်မည့် ကိန်းဂဏန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြပြီး မှတ်တမ်းပြုစုခြင်းသည် အလွန်ကောင်းသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ပါသည်။ .
ရွေးချယ်စရာများကို ရှာဖွေနေသည့် LEGO Virtual assembly ၏ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကိရိယာအများအပြားကို ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုရှိတယ်။ CAD အခြေခံစံ၊ တည်းဖြတ်သူများ၊ ကြည့်ရှုသူများ၊ တင်ဆက်သူများနှင့် ကာတွန်းများပင် ရှိပါသည်။ စည်းဝေးပွဲတွေအတွက်၊ သင်စိတ်ကူးနိုင်သလိုပဲ၊ ငါစမ်းကြည့်ရမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ အများကြီးရှိတယ်၊ ပြီးတော့ မင်းကို ပြောပြပြီး ဘယ်ဟာကို သုံးရမယ်ဆိုတာ အကြံပေးတယ်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် optical illusion ကိုဖန်တီးပေးသောအရုပ်. Thaumatrope သည် ကတ်ထူပြား၊ သတ္တု၊ သစ်သား သို့မဟုတ် လှည့်ပတ်ရန် ကြိုးနှစ်ချောင်းကို တွဲချိတ်ထားသည့် အခြားပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဒစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ disc ၏တစ်ဖက်စီတွင် ပုံဆွဲသည့်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည်။ ကြိုးများကို လှည့်၍ လှည့်ရန် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အယ်လ်ဘမ်၏ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ပုံဆွဲခြင်းကို ပြုလုပ်ထားသည်။
ဒါခေါ်တာ တစ်ခုပါပဲ။ ဒဿနအရုပ်များအောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ပြောသော၊ XNUMX ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် ဖန်တီးထားသည့် အရုပ်များ အတွဲလိုက်သည် အလင်းပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများနှင့် လှည့်စားမှုများကို အခြေခံထားသည်။ သူတို့ဟာ ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ရှေ့ပြေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ အခုမှသိတယ်။
CD ထဲက spinning top ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ငါတို့သွားမယ် ပြန်လည်အသုံးပြုပစ္စည်းများမှအိမ်လုပ် spinning top ကိုတည်ဆောက်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်အသုံးမပြုတော့သော CD သို့မဟုတ် DVD အဟောင်းများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဒါဟာကလေးများနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများနှင့်အတူ၊ ကျောင်း၊ နွေရာသီကျောင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်လှုပ်ရှားမှု၏အကျိုးကျေးဇူးကိုများစွာသောအရာများအတွက်အသုံးချပြီးဘာကိုရှင်းပြနိုင်သည် gyroscope ၎င်းတွင်ရှိသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အသုံးအဆောင်များသို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်သေးသေးလျှင်သူတို့ကိုသံလိုက်အိမ်မြှောင်ကိုသုံးရန်၊ ပစ္စည်းများဖြတ်ရန်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်သင်ပေးနိုင်သည်။ မဟုတ်ပါဘူး spinner အမျိုးအစား :) ဒါပေမယ့်အဲ့တာတောင်မှ 1'30 ထက်ပိုပြီးလှည့်ပတ်နေတဲ့စကျင်ကျောက်ပုံစံကိုကျွန်တော်အံ့သြမိတယ်။ »
ဒီဆောင်းပါးဟာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်၊ အဲဒါကလည်ချည်ထိပ်ကိုတည်ဆောက်ပုံနှစ်နည်းရှိပါတယ်။ ပထမနှင့်အရိုးရှင်းဆုံးအပိုင်း ၃ ပိုင်းကိုစီဒီ / ဒီဒီ၊ စကျင်ကျောက်နှင့်ပလပ်ကိုသုံးသည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာ Instructables ဆောင်းပါးအပေါ် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ရန်ခက်ခဲပြီးလုပ်ရန် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသည်။ သိပ်မများပေမယ့်ကလေးငယ်များအတွက်မသင့်တော်ပါ။
အဆိုပါ spinnersကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများကိုခဏတာရူးသွပ်စေသည့်နတ်ဆိုးများသည်ဤအပိုင်းသို့ (နှင့်ဆရာများက ပို၍ ပင်ရူးသွပ်နေခြင်း) သည်လည်း Ikkaro သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်သတ္တု (သို့) ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကိုယ်ထည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့လည်ပတ်သည့်ဗဟို ၀ ိုင်နှင့်ကပ်ထားသည်။ ဒီလှုပ်ရှားမှု၊ အကြောင်းပြချက်တချို့ကြောင့်ငါတို့ကြိုက်တယ်။
၎င်းတို့သည် ADHD၊ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရေးစသည်တို့ကိုကူညီရန်ကတိပေးခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ Amazon မှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်း ၂၀ စာရင်းထဲမှာပါ ၀ င်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါ Spinner အဖျားလူတိုင်းအံ့သြသွားသည်။ သူတို့ကပင်ရှိသည် Reddit အပေါ်ရုပ်သံလိုင်း ဘယ်မှာကျနော်တို့အများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းအချက်အလက်အများကြီးတွေ့လိမ့်မည်။
အခြို့သောလိုင်း၌တည်၏ ကစားစရာများနှင့်စီမံကိန်းများ မင်းတို့သူတို့ကိုမင်းလုပ်နိုင်တယ်ဒါငါတို့ထွက်ခွာခဲ့တာပါ အမျိုးအနွယ် ငါတို့ဒီဟာကိုထားခဲ့ ကစားစရာအလှည့်.